Indlela Yokufumana Iindaba Ezikufihla Kwilizwe Lenu
Kukho Uninzi Ukubhala Ngezithili Zakho
Ngaba ufuna iindaba eziphathekayo ukuze uzikhuphe kodwa ungazi ukuba uqala kuphi? Nazi ezinye iindawo onokubumba iingcamango zamanqaku eendaba ezifanele ukubhala malunga nelokulo. Emva kokuba ubhaliwe inqaku lakho, khangela ukuba unokuyifakisha kwiphepha lomphakathi , okanye ulibeke kwiblogi yakho.
Ukuba ufuna ukugubungela ulwaphulo-mthetho lwengingqi , tyelela iipolisi zendawo yangasese okanye indawo yesikhululo (kulungile ukubiza ngaphambili). Ukuba uhlala edolophini encinci, yazi umphathi wamapolisa, umcuphi kwaye uxabise iipolisi ukuba unako .
Buza malunga nawaphi na amatyala anomdla okanye ulwaphulo-mthetho abaye baphatha ngokutsha, okanye bacele ukuba babone irekhodi lokubanjwa kwoluhlu lwemihla yeziganeko.
I- courthouse yendawo ingabakho ubutyebi bebali. Inkundla yesithili sendawo iya kuba yintoni apho iimeko ezincinci zijongene nazo - zonke izinto ezivela kwiikiti zamathambo ukuya kwiimpazamo ezingekho phantsi kwexesha - ngelixa igosa eliphezulu liza kubakho ukuvavanywa kwamacala. Hlola kwiofisi yenkundla yenkundla ukubona ukuba zeziphi iimeko ezifunekayo ukuba zivezwe nangayiphi na imini.
Ibhunga le sixeko, ikhomishini yasekommeni, ibhodi leedolophu okanye ikomiti yaseklinikhi - nantoni na ekuthiwa yiyo, urhulumente wengingqi unokuba ngumthombo ocebileyo wamabali kuye nawuphi na intatheli. Qala ngokufumana i-website yorhulumente weedolophu wasekuhlaleni. Kuya kubakho ukuluhlu amaxesha kunye neendwendwe zeentlanganiso ezizayo . Bona izinto ezixutyushwa ngazo, yenza uphando oluthile, uze ufike entlanganisweni, ipeni kunye nencwadana ngesandla .
Iintlanganiso zebhodi yesikolo nazo zingavelisa amabali amakhulu. Kwakhona, izithili zesikolo ziba newebhusayithi ezenza uluhlu lwezihlandlo zee-bhodi zesikolo kunye nama-ajenda. Ezi ziza kusenokwenzeka ukuba ziluhlule amalungu ebhodi yeziko kunye nolwazi lokunxibelelana, olunokubaluleka ukwenza uphando lwangaphambili okanye ukwenza intetho-ndlebe emva kwentlanganiso.
Izikolo zezemidlalo eziPhakamileyo
Abadlali bezemidlalo abafunayo kufuneka bangaboni ngaphezu kwezikolo zabo zasekuhlaleni zokuzonwabisa . Abaninzi abaphezulu bezemidlalo - abo bafaka i-NFL, i-NBA, kunye ne-MKB-baqala ukugubungela ibhola lebhola eliphezulu, ibhola lebhokshire kunye nemidlalo ye-baseball, phakathi kwezinye imidlalo. Hlola iwebhusayithi yakho yesikolo esiphakamileyo kwiishedyuli.
Amacandelo oluntu kunye neeLibrari zeNgingqi
Iindawo ezifana nalezi zivame ukuba neebhodi zengxelo eziza kubhala iziganeko ezizayo kwindawo yakho. Ezi ndawo zihlala zifumana imicimbi efana neentetho ekutyeleleni izithethi okanye ababhali okanye iiforamu zoluntu.
ImiGangatho yezobuGcisa kunye noBugcisa imibutho
Ingaba kukho umboniso omtsha ngumculi ophezulu kunye nozayo kwigalari yangingqi? Ukuphonononga umboniso okanye udliwano ndlebe ngomculi. Ingaba iqela lomphakathi lidlala umdlalo omtsha? Kwakhona, bhala ukuhlaziywa okanye udliwano-ndlebe nabadlali okanye umlawuli.
Iikholeji kunye neeyunivesithi zihlala zihambelana kwiinkalo ezahlukeneyo zezifundo, amakhonsathi kunye neforamu ezihlala zikhululekile kwaye zivulelekile kuluntu. Hlola iwebhusayithi yekholeji ukulungiselela uluhlu lweziganeko ezinjalo.
Ngaba ufuna ukubhala umbhali? Udliwano-ndlebe nabathengisi beengingqi ngeengcamango zabo kwiimeko zoqoqosho. Amashishini abo aphumelelayo okanye anzima? Ingaba izitolo ezintsha zivula okanye zivale kwiSitalato saseKhaya sasekuhlaleni?
Nantsi i-20 e-Best Best Boredom-Busting Subreddits Ukulandela
Yiyiphi Isilinganiselo Sonke?
Isikhokelo soMqalayo wokudlala i-Mahjong